China Mmezi Poly Tarp Poly Tarp factory na ndị na-emepụta | ShiningPlast
A na-eji akwa akwa HDPE mee PE PE, jiri ihe LDPE mechie akụkụ abụọ ahụ, okpomoku okpukpu anọ ka ejiri eriri PP mechie. Aluminium grommets na oge n’etiti akụkụ anọ nwere ike ịkwado akụkụ nkuku site na ogwe plastik.
Ejiri akwa a kpara akpa siri ike na-adịgide adịgide ma ụdọ eriri elu grommets dị ọcha na-ahụ maka ngwa ahịa ọkwa. UV gwọkwara na ogwe nkuku nwekwara ike ịdị iji mee ka tarp ahụ bụrụ ihe na-adịgide adịgide ma sie ike.
Ibu ibu 200-400 gsm
Ntughari 14x14 ~ 16x16
Nha 6 '* 8' / 8 '* 8' / 8 '* 10' Max ka 100 '* 100'
1. Iberibe akpa ọ bụla juru na akpa poly poly na ntinye aha.
Nke gara aga: Nnukwu Ọrụ Poly Tarp
Osote: Tarpaulin Rolls